Myanmar’s education system has been in chaos since February’s military coup, with many students boycotting school. Despite this, the State Administration Council governed by the military junta pushed ahead to reopen schools in early November 2021. The last attempted reopening was in May.
However, many schools across the country did not open at all and classrooms remain empty. This might well be due to the shortage of educators who are still participating in Civil Disobedience Movement activities. According to independent surveys,amajority of the parents in Myanmar don’t want to enroll and send their children back to school because of safety concerns. A number of schools have been targeted by unknown attackers.
Under these circumstances, the question has arisen: As there are many empty classrooms, is it wise to continue building schools?
For the Studer Trust, there is only one answer—we need to continue building schools in Myanmar! Here are the reasons why we need to continue:
Due to the current political turmoil in Myanmar, many investors and international NGOs have left the Country or are winding up. A number of large and medium-sized international humanitarian NGOs have also been targeted by the junta and ordered to suspend some of their programmes and activities. Inacountry like Myanmar, in transition to democracy since 2011, the need for infrastructure is still great, and the government’s resources are even more limited now. In order to help fill this gap, the role of small organizations that operate withalow profile like the Studer Trust are vital.
Since 2018, the Studer Trust has decided to focus on supporting communities in some of the most underdeveloped areas in the country: Chin State, Nagaland in Sagaing Region, Shan State, and Tanintharyi Region. Many of these communities include some of the most underserved minorities in Myanmar. The area needs many safe school buildings for the additional students that will be enrolling in the next few years. We simply can’t afford to keep the children away from the schools forever. If the Studer Trust keeps building schools in such remote areas, our schools will be ready to welcome these new students.
The Studer Trust helped rebuild 15 schools in the Ayeyarwaddy Delta after Cyclone Nargis destroyed 50 percent of the public schools in the area. The vast majority of the villagers really appreciated receiving Studer Trust’s strong concrete school buildings, especially after many poorly-built schools made from bamboo or wood were destroyed or severely damaged by the cyclone. Many villagers subsequently told us they would seek shelter at Studer Trust’s schools in case ofanatural disaster. The Studer Trust school buildings are usually the strongest and safest buildings in the whole village, especially in the more remote areas of Myanmar.
When the Studer Trust teams up with our generous donors, our main objective is to provide better education by supporting new schools and trained teachers. The goal is to provideasafe and healthy environment for all children. But our school buildings have been used for many occasions when school is not in session. For example, one of the Studer Trust’s schools served asafree quarantine center in 2020. It truly represents the promise to “Respect the Spirit of Helping” upon which the Studer Trust was founded.
For the sake of the children of Myanmar in their remote communities, let’s continue building classrooms and school buildings!
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာသင်ကျောင်းများအား ဆက်ပြီး ဆောက်သင့်၊ မဆောက်သင့်
မြန်မာ့ပညာရေးဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ စစ်အာဏာသိမ်းမှု၊ ကျောင်းများအပေါ် ကျောင်းသားများ၏ သပိတ်မှောက်မှုကြောင့် ဖရိုဖရဲအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းတွင် ကျောင်းများပြန်ဖွင့်လှစ်ရန် ဖိအားပေးခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်လှစ်ရန် မေလကလည်း နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်ရှိသော ကျောင်းအများစုသည် လုံးဝဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသလို စာသင်ခန်းများမှာလည်း လစ်ဟင်းလျက် ရှိပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် ဆရာ၊ဆရာမများ Civil Disobedience Movement တွင် ပါဝင်နေသောကြောင့် ဆရာ၊ဆရာမဦးရေ လုံလောက်မှုမရှိခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ လွတ်လပ်သောစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသည့် မိဘအများစုသည် လုံခြုံရေးအခြေအနေများကြောင့် ကလေးများအား ကျောင်းအပ်နှံခြင်း၊ ကျောင်းသို့ပို့ဆောင်ခြင်းများ မပြုလုပ်လိုကြပါ။ ကျောင်းအများစုသည် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများ၏ ပစ်မှတ်ထားခြင်းကို ခံနေရပါသေးသည်။
၎င်းကဲ့သို့ အခြေအနေများအောက်တွင် “စာသင်ခန်းများ လစ်ဟာနေခြင်းကြောင့် ကျောင်းများကို ဆက်လက်တည်ဆောက်သင့်ပါသလား?” ဆိုသော မေးခွန်းများ မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။
Studer Trust အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောင်းများကို ဆက်လက်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်ဟု ဖြေဆိုလိုပါသည်။
အောက်ပါအကြောင်းအရာများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများစုနှင့် နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့ နိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားကြသလို တစ်ချို့မှာ ဖျက်သိမ်းကြတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ လူမှုအကျိုးပြု NGO အဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ််နှင့် လှုပ်ရှားမှုများ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေရန်အတွက် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ပစ်မှတ်ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လောက်မှစတင်၍ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သော နိုင်ငံမျိုးတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက် များစွာရှိလျက်ရှိပြီး အစိုးရ၏ ပင်မအရင်းအမြစ်များမှာ ယခုကဲ့သို့ အချိန်မျိုးတွင် ပိုမိုကန့်သတ်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်တင်းရန်အတွက် Studer Trust ကဲ့သို့ လူသိနည်းသော အဖွဲ့အစည်းငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အရေးပါလာပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ Studer Trust သည် နိုင်ငံတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသော ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ နာဂတောင်တန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသူများကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းဒေသများတွင် နေထိုင်သူအများစုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ထောက်ပံ့မှု လုံလောက်စွာ မရရှိသူများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းဒေသများတွင် နောင်လာမည့်နှစ်များအတွင်း ကျောင်းအပ်နှံကြမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် လုံခြုံသည့် စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံများ လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းသားများအား စာသင်ခန်းနှင့်ဝေးရာတွင် အမြဲတမ်းထားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ Studer Trust အနေဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ဝေးလံသောဒေသများတွင် စာသင်ကျောင်းများ ဆက်လက်တည်ဆောက်ပေးထားခြင်းဖြင့် ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူသစ်များ အဆင်သင့် ပညာသင်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နာဂစ်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ စာသင်ကျောင်း စုစုပေါင်း၏ ၅၀% ပျက်စီးခဲ့သည့်အနက် စာသင်ကျောင်း ၁၅ ကျောင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် Studer Trust မှ အကူအညီပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော မူလစာသင်ကျောင်းအများစုမှာ ဝါး (သို့မဟုတ်) သစ်သားနှင့် ဆောက်လုပ်ထားသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ Studer Trust မှ ဆောက်လုပ်ပေးသော ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦးစာသင်ကျောင်းများကို ရရှိသောအခါ များစွာသော ရွာသူရွာသားများက ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရွာသူရွာသားများက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့လျှင် Studer Trust ၏ စာသင်ကျောင်းများတွင် ခိုလှုံမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောခဲ့ပါသည်။ Studer Trust ၏ စာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦးများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ရွာလုံးတွင် အထူးသဖြင့် ဝေးလံခေါင်ဖျားသော ဒေသများတွင်ရှိသည့် အဆောက်အဦးများအနက် လုံခြုံမှုအရှိဆုံးနှင့် အခိုင်ခံ့ဆုံး အဆောက်အဦး ဖြစ်ပါသည်။
Studer Trust နှင့်ရက်ရောစေတနာကြီးမားသောအလှူရှင်တွေနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သည့် အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံအသစ်များနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားသော ဆရာ၊ ဆရာမများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေးကို ရရှိရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်သည် ကလေးများအတွက် လုံခြုံ၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကို စီစဉ်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျောင်းပိတ်ချိန်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ Studer Trust ၏ စာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦးများသည် အခြားသော အကြောင်းတရားများအတွက် အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုကြသည်ကို မှတ်တမ်းများအရ သိရှိရပါသည်။ ဥပမာ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွက် Studer Trust ၏ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို Free Quarantine Center အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်သည် Studer Trust တည်ထောင်စဉ်တည်းက ထားရှိခဲ့သည့် “ကူညီလိုသည့် စိတ်ဆန္ဒကို ထောက်ထားအလေးပေးခြင်း” ဆိုသည့် ကတိကဝတ်ကို အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝေးလံခေါင်ဖျားသည့်ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည့် ကလေးငယ်များ၏ အကျိုးအတွက် စာသင်ခန်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများကို ဆက်လက်တည်ဆောက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါသည်။